Fangatahana telo hivezivezy eran'ny tanàna amin'ny fitateram-bahoaka | Vaovao IPhone
Vaovao amin'ny tanàna lehibe? Hanao dia lavitra ve ianao ary te-hivezivezy amin'ny fitateram-bahoaka? Aza manahy, Androany izahay dia manome anao safidy iray amin'ireo rindranasa telo tsara indrindra hifindrana amin'ny fitateram-bahoaka. Ireo rindranasa ireo dia tsy hamela anao ho strand na oviana na oviana, miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mifindra amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa miaraka amin'ny fampahalalana rehetra, ny metro, ny bus ary ny fandaharam-potoana eny ambanivohitra, ary koa ny timer tena izy mba hahafantaranao tsara hoe hafiriana no ho tonga. ary mandra-pahoviana ianao no mijanona amin'ny bus manaraka handehanana any. Ireo rindranasa ireo dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidy tsara indrindra hitantsika hitety tanàna mora foana ary mandray anjara amin'ny fitohizan'ny tontolo iainana.
Ka andao ary handeha ny lisitry ny rindranasa telo izay raha ny zavatra niainako dia ny tsara indrindra mifindra manodidina ny tanàna miaraka amin'ny fitateram-bahoaka.
Citymapper: fitaterana rehetramaimaim-poana
Ry mpitarika mpitarika, tsy ho fantatro ny fomba handaozana ny tranoko raha tsy apetraka io fampiharana io. Mila milaza aminy fotsiny ianao amin'izay alehanao, izy no hanangana ny làlan'ny fitateram-bahoaka, izay manondro ny faharetan'ny fahatongavany. Izy io koa dia manana rindranasa amin'ny Apple Watch sy rafitra iray izay hitahiry ny fikarohana farany ao amin'ny chaché, mba hahafantaranay hatrany ny lalana na eo aza ny tsy fahampian'ny lalana. Izy io koa dia manana rohy miaraka amin'ireo rindranasa fitaterana manokana. Any Espana dia hamela anao hifindra mora foana manodidina an'i Madrid sy Barcelona.
Fampiharana lehibe iray hafa, mifehy ny fandaharam-potoanan'ny bus, ary koa ny vidiny sy ny toerana itodiana. Ho azonao atao ny mijery ny vaovao any amin'ny tanàna maherin'ny 1.200. Ho afaka hamorona làlan-kaleha ihany koa ianao ary hahafantatra izay horaisin'ny safidinao amin'ny fotoana tena izy, fomba hafa mahaliana kokoa ho an'ny fampiharana teo aloha izay tsy tokony halainao. Izy io koa dia misy fampiharana ho an'ny Apple Watch.
Transit • Fandaharam-by sy busmaimaim-poana
Nifehy ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka noho ny Transit, tsy dia nisy fiatraikany firy tany Espana, fa ao kosa ireo tanàna lehibe any Eropa, ary indrindra ny ankamaroan'ny Amerika Avaratra, fanindroany ho an'ny mpamaky anay avy amin'ny kaontinanta amerikana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fangatahana telo hivezivezy eran'ny tanàna amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka
Google dia mihoatra an'i Apple ary lasa marika sarobidy indrindra eto an-tany